Hanao Ahoana ny Fifandraisan’i Etazonia sy Aostralia Taorian’ny Esonteny Nataon’i Malcolm Turnbull an “ilay Donald”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 15:54 GMT
Malcolm Turnbull maneso an'i Donald Trump tao amin'ny Midwinter Ball – Sary : Sary avy amin'ny lahatsarin'ny 9News nohakelezin'ny mpanoratra.
Toy izay efa notaterina be, vao haingana ny praiminisitra ao Aostralia Malcolm Turnbull no naneso an'i Donald Trump tao anatinà seho hatsikana iray tamin'ny Fandihizana antenantenan'ny ririnina fanao ao Canberra. Dika mitovy an'ny Aostraliana amin'ilay fisakafoanana fanaon'ny Trano Fotsy ho an'ireo mpifandray aminy izay nobodoin'i Donald Trump tamin'ity taona ity io fandihizana io, afa-tsy ny hoe heverina ho tsiambaratelo ny fandehany.
Tsy dia tsara fanombohana loatra ny fifandraisan'izy ireo. Tsy azo lazaina ho mirindra ny antso an-telefaona iray tamin'ny Janoary lasa teo nifanaovan'ny roa tonta, Trump izay tena nanakiana fatratra ny fifanarahana momba ny fanomezana toerana hipetrahan'ireo mpitsoaponenana nifanaovana fony andron'i Obama. Voalaza fa niteny tamin'ny PM izy hoe “iny no antso faran'izay ratsy indrindra” nataonà filoham-panjakana iray teto ambonin'ny tany, ary nibitsika hoe:
Dia mino an'izany ve ianao? Nanaiky handray mpifindra monina tsy ara-dalàna an'arivony maro avy any Aostralia ho any Etazonia ny Fitantànana Obama. Nahoana? Hodinihako ity fifanarahana adaladàla ity !
Farany dia nanaiky ny hampihatra ilay fifanarahana ny fitantanan-draharahany. Amin'izao fotoana izao ireo mpangataka fialokalofana dia lanjaina sy tsinkafonina ambony ambany mihitsy.
Ilay zokiolona amin'ny fanaovana gazety ara-politika Aostraliana, Laurie Oakes, no loharano niporitsahan'ilay rakipeo misy ilay fanesonesoana. Nambarany fa tsapany ho tsy voatery hanaraka ilay “fomba fanao hatrizay tsy mandray feo” izy satria tsy nanatrika ilay hetsika izy ary mihevitra fa diso toerana eto ny fandraràna. Manaiky izany i Katharine Murphy avy amin'ny “The Guardian”:
Raha toa tohizan'ny lalantsaran'ny gazety ny hanaiky hoe tsy fandray feo ny kabary any amin'ny fandihizana antenantenan'ny ririnina, dia tena efa nikororosy isika
Nakarina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny 9News ity lahatsary ity :
Ny 9News no mpampiasa an'i Oakes. An-jatony maro ireo fanehoankevitra tao. Misy amin'ireny ny fanohanana na fanakianana an'i Turnbull sy Laurie Oakes.
Nahitàna fakàn-tàhaka ny filoha amerikàna ireo seho nataon'i Turnbull narahany fihetsika. Politicususa no namintina ny tantara:
“Izaho sy ilay Donald … mandresy izahay ary mandresy amin'ny fitsapankevitra. Tena mandresy lavitra izahay. Mandresy tsy toy izay efa nisy tany aloha. Mandresy amin'ireo fitsapankevitra. Izany izahay. Tsy ny sarintsarinà fitsapankevitra. Tsy ny sarintsarinà fitsapankevitra. Any ihany izahay no tsy mandresy. Mandresy izahay amin'ny fitsapankevitra tena izy. Hainareo ihany ny fitsapankevitra eny anaty aterineto. Mora andresena izy ireny. Fantatro izany, mahafantatra izany ve ianareo? Tsy hoe fantampantatro fotsiny. Mora andresena izy ireny. Manana ilay akama Rosiana iny aho..”
Nifamahofaho be ihany ireo fanehoankevitra tao amin'ny haino aman-jery sosialy. Nanaovan'i @tom_clift fanamarinana avy tao amin'ny Twitter ireo valinteny ho an'ny Oz, tranonkalan-kolontsaina Junkee Aostraliana:
Tsy vitan'ny Aostraliana ny tsy handranitra an'ireo mpomba an'i Trump tezitra tamin'ilay esoeson'i Malcolm Turnbull
John Wren, mpibitsika tsy mitonona anarana, no iray tamin'ireo Aostraliana marobe ao amin'ny Twitter naneso ny lazaina ho tsy fahafantaran'ireo Amerikàna izao tontolo izao:
Mianatra avy amin'ny fakàn-tàhaka nataon'i Turnbull i #Trump, Manapaka izay Rehetra ifamatorana amin'i Aostralia
Nisy betsaka ihany ireo fanehoankevitra miabo momba an'i Turnbull, toy ny an'i Alex :
Toa mba olombelona kokoa i Malcolm Turnbull taorian'ny nanorisorenany an'i Donald Trump
Angamba mety hoe onja iray tanaty vera iray nisy toaka ihany iny satria toa tsy latsaka tao anatin'ilay lalao i Donald Trump raha ny voalazan'ny masoivoho amerikàna ao Canberra:
Tsy tohina tamin'ireo esoeso nataon'i Malcolm Turnbull momba an'i Trump ny masoivoho amerikàna
1 andro izayAostralia